एसपिपी के हो? अमेरिकी नेसनल गार्डका पूर्वजनरलको लेख :: जनरल जोसेफ एल लेङग्येल, अमेरिकन नेसनल गार्ड, पूर्व प्रमुख :: Setopati
जनरल जोसेफ एल लेङग्येल, अमेरिकन नेसनल गार्ड, पूर्व प्रमुख
जनरल जोसेफ एल लेङग्येल
अमेरिकी सेनाको 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (एसपिपी) बारे अहिले विवाद जारी छ। यसका विभिन्न आयाम खुल्ने क्रममा छन्। एसपिपी आफैंमा के हो भन्नेमा पनि चासो र विवाद देखिएको छ। कतिपयले यो विशुद्ध रूपमा विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले सघाउने कार्यक्रम हो भनेका छन्। मंगलबार अमेरिकी दूतावासले एसपिपीको विवादबारे गरेको एउटा ट्विटमा पनि त्यस्तै दावी गरेको छ।
नेपाल र अमेरिकाबिच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो। नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।++
तर एसपिपीको दायरा त्योभन्दा धेरै बृहत र दीर्घकालीन छ। एसपिपी अन्तर्गत विभिन्न अमेरिकी राज्यका सेना 'नेसनल गार्ड' ले अर्को कुनै मुलुकको सेनासँग मिलेर काम गर्छन्।
एसपिपी के हो? अमेरिका र साझेदार मुलुकका लागि एसपिपीको महत्व के हो भन्ने बुझाउन नेसनल गार्डका पूर्व प्रमुख जनरल जोसेफ एल लेङग्येलको लेख यहाँ प्रकाशित गरेका छौं। अमेरिकी नेसनल गार्डको वेबसाइटमा प्रकाशित यो लेखको केही अंश हामीले नेपालीमा अनुवाद गरेका छौं। त्यति अंशले पनि एसपिपीको दायरा के हो भन्ने बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ। अंग्रेजीमा लेखिएको यो लेखको लिंक अन्तिममा छ। अमेरिकी एयरफोर्स सेवाका चार-तारे जनरल लेङग्येल सन् २०१६ देखि २०२० सम्म अमेरिकन नेसनल गार्डको प्रमुख थिए। उनले यो लेख सन् २०१८ मा लेखेका हुन्।
लेखको अंश (यसको पूर्णपाठ अंग्रेजीमा तल छ।)
अरू मुलुकसँगको गठबन्धन र साझेदारीले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीको तुलनामा ठूलो लाभ प्राप्त छ। ती सम्बन्धहरूलाई कायम राख्ने र पालनपोषण गर्ने काम रातारात सम्भव हुने कुरा होइन। विभिन्न राष्ट्रहरूबीच विश्वास निर्माणमा लगातार गरिएका प्रयासहरूको उपज हो यो।
सन् २०१८ मा हामी स्टेट्स साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) को २५ औं वर्षगाठ मनाउँदै छौं। अमेरिका र यसका साझेदारहरूलाई विश्वभर सुरक्षा र स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने बनाउनमा एसपिपीले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई फर्केर हेर्ने समय पनि हो यो।
एसपिपी यस्तो एउटा सिर्जनशील र लागत कम भएको सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो जसले नेसनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूको सेनासँग जोड्छ। नेसनल गार्डका इकाइहरूले हाम्रा सुरक्षा लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन साझेदार राष्ट्रहरूसँग सैनिक तहमा संलग्न रहन्छन्।
यसले दुवै पक्षका सेनाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास बढाउँछ। साथै सामाजिक तहमा पनि सम्बन्ध बढाउन सहयोग गर्छ।
एसपिपी अरू मुलुकका सेनाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तयार गरिएको कार्यक्रम होइन। यसको लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार मुलुकहरूबीच दीर्घकालीन साझा स्वार्थका आधारमा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु हो।
हाम्रा साझा चुनौती र खतराहरूको सामना गर्न राष्ट्रिय रक्षा रणनीति (NDS) मा उल्लिखित भएअनुरूप हाम्रो गठबन्धन र साझेदारीलाई सुदृढ र विकसित गर्दै लैजानु हाम्रो प्राथमिकता हो। यसका लागि नेसनल गार्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।
विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूको अनुरोधमा नेसनल गार्डले ती मुलुकहरूसँग एसपिपी सम्बन्ध स्थापित गर्छन्।
अस्थिर सुरक्षा वातावरण
पछिल्लो दशकमा जे जस्ता भूराजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसले रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको ठूलो चिन्ता थपेको छ। अमेरिकासँग अझै पनि संसारमा सबैभन्दा सक्षम सेना छ। तर हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरूले हाम्रा कतिपय कमजोरीको उपयोग गर्न खोज्छन्।
कूटनीतिक, सूचना सम्बन्धी, सैन्य र आर्थिक क्षेत्रका हरेक पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय क्षमताको प्रयोग गर्ने रणनीतिहरू हामीले देखिरहेका छौं।
चीन अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एक प्रमुख खेलाडी हो। यसले चीनलाई जनमुक्ति सेनाका लागि लगानी बढाउने र साउथ चाइना समुद्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने बनाएको छ।
त्यसैगरी रसिया अहिलेको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र लामो समयदेखि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई बदल्न चाहन्छ। त्यसका लागि उसले सैन्य शक्ति, कूटनीति, आर्थिक तागत, गलत सूचना र प्रपागान्डाको प्रयोग गर्छ।
इरान राष्ट्रिय सेना र कतिपय अनधिकृत संगठनहरूको प्रयोग गरेर मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ।
पछिल्ला केही सकारात्मक परिवर्तनका बाबजुद कोरियन उपमहाद्विपको सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा राज्यको अंग नरहेका संगठित शक्तिले धेरै क्षमता आर्जन गरेर अमेरिकाभित्र र बाहिर नयाँ खतरा उत्पन्न गराएका छन्।
यस्ता खतरा विश्वका भूभागअनुसार फरक छन् र अमेरिका एक्लैले तिनको सामना गर्नु कठिन र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ। अमेरिका एक्लैले यी खतराको सामना गर्नु भनेको आफ्नो सेनाको क्षमता चाहिनेभन्दा धेरै तन्काउनु हो।
अरू मुलुकसँगको गठबन्धन र साझेदारीबिना अमेरिकाले यी खतराहरूको सामना गर्नु थप कठिन हुँदै जानेछ। खतराका फरक-फरक आयाम रहेको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा अमेरिकाले गठबन्धन र साझेदार मुलुकहरूसँग काम गरेर आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ र अग्रस्थानमा राख्नु पर्छ।
अंग्रेजी लेखको पूर्णपाठः
लेखको पूर्णपाठ अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १, २०७९, १८:५६:००